Shirkii Arrimaha Soomaalida oo ka furmay magaalada London ee dalka Ingiriiska | SAHAN ONLINE
Shirkii Arrimaha Soomaalida oo ka furmay magaalada London ee dalka Ingiriiska
LONDON – Waxaa magaalada London si rasmi ah uga furmay shirka looga hadlayo arrimaha Soomaaliya taasoo ay martigelinayso dowladda Britain.
Shirkan ayaa wax aka qeybgalaya hoggaamiyaasha caalka ,iyadoona ujeedku yahay in looga arrinsado sidii loo kordhin lahaa gargaarka bani’aadannimo iyo sidii horumar looga gaari lahaa arrimaha ammaanka Soomaaliya.
Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay furitaanka shirka,wuxuuna sheegay in markii uu xilka qabtay uu muhiimada 1aad uu siiyey sidii wax looga qaban lahaa xaalada abaarta ee dalka si looga hortago in ay dhacdo xaaladdii sanadkii 2011-kii.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u mahadceliyey hoggaamiyaasha caalamka iyo qurbo joogta Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay ka jawaabeen baaqii dowladiisa ee ahaa in gargaar lala soo gaaro shacabka ay abaartu ku habsatay.
Waxa uu sheegay in uu sidoo kale abaaraha dalka ka jira ay barakaciyeen ilaa 600,000 oo qof tan iyo bishii Nofeembar ee 2016-ka ,wuxuuna ugu baaqay caalamka in laga hortago in dalka ay ka dhaco xaalad bani’aadanimo iyo sidoo kale in diirada la saaro sidii looga soo kaban lahaa abaarta.
Hoggaamiyaasha caalamka ee ka qeybgalaya shirka ,waxaa kamid ah Ra’iisal Wasaaraha Britain,Theresa May,Xoghayaha guud ee Qaramada midoobay Antonio Guterrs iyo madax kale.
Ujeedada shirkan ayaa ah in lagu heshiiyo qorshe lagu tababarayo ciidamo Soomaaliyeed oo beddela ciidamada midowga Afrika ee hadda dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Dowladda Britain ayaa sheegtay iney ka go’an tahay in ay ka hortagto in Soomaaliya ay macaluul ka dhacdo ,waxayna ku baaqday in kaalmada bani’aadannimo ee Soomaaliya la kordhiyo.
Ugu dambeyn ,waxaa jirta cabsi ah in haddii xaaladda Soomaaliya aan hadda wax laga qaban ay dhici karto in ay ugu laabato colaad hor leh.